Yini okufanele uyenze uma phansi izinkuni isikhunta? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yini okufanele uyenze uma phansi izinkuni isikhunta?
Hlela: UDenny　2020-03-02　Iselula
Okokuqala, yimaphi ama-coups okubuyisa isikhunta phansi kwokhuni?
Faka i-bleach efudumele ngesilinganiso esingu-1: 3 ukuze unciphise ukuqoqeka. Ngemuva kokuxutshwa, sebenzisa indwangu ethambile ukuyesula. Naka ukuthi ukugcotshwa kwe-bleach akufanele kube phezulu kakhulu. Uma i-mildew isingene esitezi sokhuni, kungcono ukuyikhipha masinyane futhi ikuvimbele ukuthi kungathinti isitezi saphansi.
Okwesibili, indlela yokulungiswa kwesitezi
Lapho uhlanza phansi ngokhuni oluqinile nokhuni, kufanele unake ukuligcina lome futhi lihlanzekile. Kufanele uvimbele ukuthi igezi ligcinwe ngamanzi amaningi. Kufanele futhi uvimbele ukusetshenziswa koketshezi olonakalisayo njengamanzi we-alkali kanye noketshezi lwensipho ukuhlanza phansi nokuvimbela ukulimala kwefilimu yepende yaphansi yokhuni. Sebenzisa isifutho sikakoteni esisongekile noma ithawula ukuyihlanza. Uma uhlangabezana nokungcola okunzima ukukhipha, cabanga ukusebenzisa ubuya bensimbi ukuyigaya kahle ukuze uvikeleke ukuthi ungakhuhleki nge-mop eningi kakhulu noma ngamanzi ashisayo ngokweqile. Ukunakekelwa kwansuku zonke kufanele kuthathwe ukuvikela uthuli lwangaphandle ukuthi lungandize egumbini ngangokunokwenzeka, futhi amawindi kufanele avale ngesikhathi ukuze uvimba umswakama ungangeni.
2. Indlela yesondlo
Kunconyelwa ukwenza umsebenzi wokulungisa phansi ngokhuni ngesikhathi. Kungcono ukufaka i-wax kabili ngonyaka. Lokhu kungaqinisekisa ukuthi ifilimu lokupenda elisophahleni lokhuni lihle futhi lingamboza ukuklwebheka, okwenza ukuthi lokhu okwenziwe phansi kwokhuni kubonakaliswe kahle futhi kube yinhle. Ngenqubo yokufaka i-waxing, ungasebenzisa indwangu eyomile ukusula phansi kuqala, bese ufaka i-wax. Sula i-wax ngokulinganayo, futhi uqinisekise ukuthi zonke izikhundla ziyasulwa. Ngemuva kokumiswa, sula phansi phansi ngendwangu ethambile. I-bushelelezi futhi iyabhidliza.
Iphansi lokhuni linconyelwa ukufakwa egumbini ngaphandle kokukhanya kwelanga ngqo, ngoba ifilimu lokupenda lizobangela ukuqhekeka nokuguga uma kuvezwa ukukhanya isikhathi eside. Uma phansi lokhu kubekwa ehlobo, khumbula ukuvula iwindi ugcine umoya omusha egumbini ukuvikela umswakama ongaphakathi kwegumbi ungabangeli izingqinamba nezindawo ezinjengethayela phansi. Hlukanisa indlu yangasese kanye naphansi yegumbi, uma kungenjalo phansi kuvame ukubumbeka, okuthinta impilo yenkonzo yaphansi yokhuni.
Yini okufanele uyenze uma phansi izinkuni isikhunta? Okuqukethwe okuhlobene